Tete Grace - Chii Chinokonzera Mvura Munhengo Yangu? Tete Grace - Chii Chinokonzera Mvura Munhengo Yangu?
Tete Grace - Chii Chinokonzera Mvura Munhengo Yangu?
Tete Grace: Mvura inoita kana wava nezemo rokuda kurara nemurume. Hapana chakaipa kuita mvura.
Kuita mvura chinhu chakanaka chose kana wava pakurara nemurume nokuti zvinodzivirira kusvuuka mukati uye kusvuuka kwemurume. Chakaipa kusaita mvura.
Kana ukatadza kunyorova unotopedzisira watadza kuiswa nokuti zvinogwadza.